Waa sidee rikoorka Lionel Messi ee kulamada uu wajahay Real Madrid ka hor kulanka habeen dambe ee El Clasico? – Gool FM
(Barcelona) 05 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou ku soo dhaweyn doonta habeen dambe Tababare Santiago Solari iyo kooxdiisa Real Madrid lugta hore ee Semi-finalka Copa del Rey.
Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ka hortagaya kooxda Real Madrid ee sida wayn ay u xafiiltamaan, waxaana la filayaa inuu weliba safka hore ku soo bilowdo.
Xiddigaan reer Argentina ee Lionel Messi waxa uu ka hortagay kooxda Real Madrid 38 kulan, waxaana uu kooxda ka dhisan caasimada Madrid uu guul ka helay 17-jeer, waxa uu ka dhaliyey 26 gool, isagoo ku dhiibay 14 gool oo kale.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa bandhigga uu sameeyey kulamadii la soo dhaafay marka uu laacibka shanta goor ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ka hor tagay kooxda Real Madrid.
RIKOORKA MESSI EE REAL MADRID:-